YANDA योग र अधुनिकिकरण – YANDA
ढिलै भएपनी, योग द्रुत दरमा लोकप्रियता चार्टहरूमा चढाईएको छ। तपाईको शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक सुस्वास्थ्यमा सुधार ल्याईएको कारणले यो दुबै सेलिब्रेटीहरू र साधारण मानिसमा पनि आकर्षित भएको छ। साथसाथै आधुनिक जीवनशैलीको आवश्यकताहरू पूरा गर्न हामी यसको धेरै नवीन संस्करणहरू देख्छौं साथसाथै पावर योग, हठ योग, बियर योग, जिवमिक्ती योग, बिक्रम योग,सिवनन्द योग,इन योग आदि एस्तै थुप्रै योग अभ्यास हरु भैरहेको छ। अब कुरा आउछ के योग को अधुकिकरण राम्रो हो? योग को आधुनिक र लोकप्रियता संगै नेपाल सरकार ले गत बर्ष माघ १ गते बिद्यालयमा योग पाठ्यक्रम र योग तालिम अनिवार्य गरेको छ। यो एउटा् खुशी को कुरा त हो ।तर म यस्मा खुशी हुनु भन्दा बढी चिन्तित छु। योग तलिम लेकै आधार मा मत्र सिकाउने हो भने भोलि उनिहरुक स्वास्थ मा असर र चोट पटक को सिकार होलान् भन्ने भय रहेको छ। किनकि अहिले शिक्षक लाई तालिम देनि पनि एक जान योग चिकित्सक देख्दिन म।।
योग को लोकप्रियता संगै एस्को अस्तित्व मा नि अब ठुलो प्रश्न खडा हुन थालेको छ?
हो आधुनिकता ले हामीले भबिस्यबाणी गरेर कति कुरा पहिले नै होशियार भएर अप्नाउन छक्छौ।यो एक बर्दान नि हो। तर सबैकुरा आधुनिक करण हुन जरुरी छ त? अबस्य पनि होइन । आधुनिकता नै मानव र जिबान्त जीव हरु को स्वस्थ मा नै हनि गर्नु मा मुख्य कारक बनेको छ। तेस्तै योग पनि यश बाट असुतो रहेन। योग जो मनिसको सारिरिक, मानसिक ,आध्यत्मिक स्वास्थ लाई नै एक्बद्द रुपमा सुधिकरण गर्ने विधि मा नै अधुनिकरण भए मानवजाती को स्वस्थ स्थिती के होला?
योग जति सजिलोसँग हामीले बुझको छौं ।तेति सजिलो छैन।
सामान्यतया मानिसहरूले केवल योगलाई केवल शारीरिक आसनको रूपमा अवमूल्यन गर्छन् र योग एति मा मात्र सिमित नभएर मानसिक स्वस्थ र अध्यात्मिक ज्ञान भन्दा नि मथिको बिषय हो । योग यो ब्रह्माण्ड र समुन्द्र जस्तै ठुलो र गहिरो बिषय हो।
योग लगभग ३००० बीसीमा शुरु भएको एउटा पुरानो अभ्यासको रूपमा शुरू भयो। सिन्धु घाटीमा योगका आसनहरूको ढुगाले कुँदेका चित्रहरू पाउन सकिन्छ जसले मूल पोसेज र अभ्यासहरू चित्रण गर्दछ। योग दिव्य ज्ञानको पथमा हृदय र आत्माको बीचमा सद्भाव प्राप्त गर्न एक तरिकाको रूपमा विकसित गरिएको थियो
‘योग’ एक संस्कृत शब्द हो जसको अर्थ हो ‘सँगै हुनु, एकजुट हुनु वा सँगै जुवा गर्नु’, र योगको अनिवार्य उद्देश्य शरीर, दिमाग र आत्मालाई एक संयोजनमा ल्याउनु हो। योगका केन्द्रीय विधिहरू शारीरिक आसनहरू वा ‘आसना’ , सास फेर्ने तरिकाहरू वा ‘प्राणायाम’ र ध्यान हुन्। योगमा स्वस्थ जीवनशैली, खाने बानी, मानसिक दृष्टिकोण,पनि स्वास्थ्य र सन्तुलनको लागि योगिक मार्गको एक हिस्सा हो।
योगमा हामी शरीरको अनुशासन जान्छौं जुन जागरूकता र सावधानीबाट बाहिर आउँदछ, हाम्रो शरीरको सूक्ष्म उर्जा प्रवाह र हाम्रो सासको जीवन दिने तालमा ट्यून गर्दै। विचार यो हो कि हाम्रो शारीरिक अनुभवमा गहिरो र सूक्ष्म रूपमा प्रवेश गरेर, हामी आफैंसँग बढी सम्बन्धमा रहन सक्छौं।
२०१८ मा पछिल्लो अपडेट गरिएको योग तथ्यांक अनुसार विश्वव्यापी तवरमा लाखौं करोड योग चिकित्सकहरू हुनसक्छन्। योगलाई जीवनशैलीको रूपमा स्वीकार गरिएको छ, प्रकृतिको शुद्ध उपहारको रूपमा जसले शून्य साइड इफेक्टका साथ अद्भुत स्वास्थ्य लाभहरू ल्याउँछ (यदि सही तरिकाले अनुसरण गरियो भने)। यद्यपि केही अध्ययनहरूको माध्यमबाट योगलाई पहिले सोचेभन्दा बढी खतरनाक ठानिन्छ किनकि यो अन्य खेलहरूमा धेरै चोटपटक लाग्ने कारणको रूपमा चिनिन्छ। सद्गुरु भन्छन् कि चिकित्सा र वैज्ञानिक हिसाबले आज हामी यो प्रमाणित गर्न सक्दछौं कि हाम्रो शरीर र दिमागले राम्रो तरीकाले काम गर्दछ, हाम्रो रगत रसायन परिवर्तन गर्न सकिन्छ, हाम्रो बारेमा सबै कुरा परिवर्तन गर्न सकिन्छ यदि हामी योग र ध्यानको माध्यमबाट मात्रै रमाईरको छौं ।तर उनले यो पनि थप्छन् कि उनले योग शब्द प्रयोग गर्न चाहँदैन किनभने जब उसले योग देख्छ कि मानिसहरूले पश्चिममा विशेष गरी अमेरिकामा अभ्यास गरिरहेका छन्, यसले उसलाई डराउँदछ। कसलाई दोष दिनुहोस्?योग वा साधकहरू। हामी यो अनुमान गरौं कि यो कहीं बीचमा छ। पूर्वी दर्शनको अनुसार योगलाई केही नियमहरु अन्तर्गत अभ्यास गर्नु पर्ने छ जस्तो कि अहिम्सा ,सत्य अस्तेय । खाली पेट र आन्द्रा अन्य सफा अभ्यासहरू हुन् जुन योग अभ्यासको अघि पूरा गर्नुपर्दछ।
साथै, योग अब उद्योग मा आय को स्रोत को लागी एक सजिलो विषय को रूप मा लिइएको छ। त्यहाँ एक हप्ता वा एक महिनाको लागि प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू छन् जुन स्पष्ट रूपमा कसैको लागि योगगुरु वा प्रशिक्षक बन्न योग्य छैनl
यो एक मास्टर को मार्गदर्शन मा शीर्षक को लागी वर्षौं अभ्यास र अनुभव लिन्छ किनकि यो सानो छैन र पक्कै पनि सजिलो पनि छैन।
तेस्तै योग को नकारात्मक पक्षहरू नि धेरै छन् र योग को आधुनिकताले मानव जाति को स्वास्थ मा ठुलो नकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ ।यसले तपाईंको स्वास्थ्य, सौन्दर्य, र दिमागमा केही प्रतिकूल साइड इफेक्टहरू पनि छ।
योगाको नकारात्मक प्रभावहरू:
जबकि यो व्यायाम धेरै लाभ प्रदान गर्दछ, यसको साइड इफेक्ट पनि छ। यदि शरीरको कुनै पनि आसन सही तरीका र प्रविधिको रूपमा प्रदर्शन गरिएन भने यसले शरीरको दुखाइ, उच्च रक्तचाप, स्नायु प्रणालीको बिग्रन आदि जस्ता केही गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ।
योगको प्रतिकूल प्रभावहरू;
प्रत्येक व्यायाममा केही प्रतिबन्धहरू हुन्छन् जुन सबैका लागि अयोग्य बनाउँदछ। उदाहरण को लागी, पीठ दुख्ने मानिसहरु को लागी केहि योग आसन अभ्यास गर्नु हुँदैन। यसैले, यदि तपाइँ गलत आसन अभ्यास गर्नुहुन्छ भने, यसले केहि गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ।
पहिले नै भनिएझैं सबै योग आसनहरू सबैका लागि होईन। असंख्य योग पोजमा हेडस्ट्यान्ड्स समावेश छ जुन वास्तवमा दबाबमा स्पाइक हुन सक्छ। त्यहाँ केहि अन्य आसनहरू छन् जुन अक्टुलर स्नायुहरूमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ वा तपाईंको स्नायु प्रणालीमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ। गलत आसनको अभ्यास गर्नाले वा यसलाई गलत तरिकाले गर्दा सजिलै आन्तरिक चोटहरू लाग्न सक्छ। योगको अभ्यास गर्नु आवश्यक छ रणनीतिक र विधिगत तरिकाले सही प्रविधिहरूमा ठूलो ध्यानका साथ।
आन्तरिक घाइते बाहेक, योग आसनको गलत अभ्यासले सजिलैसँग बाहिरी चोटहरू पनि निम्त्याउन सक्छ। यदि तपाईं सुरुमा उन्नत आसन अभ्यासको रूपमा धेरै छिटो गइरहनुभएको छ भने, तपाईं आफैंलाई मांसपेशिको तनाव, मोच, र घाउको बीचमा पाउन सक्नुहुन्छ। सही तरीकामा योग आसनहरू प्रदर्शन गर्न, तपाईंको शरीरमा लचिलो हुनु आवश्यक छ। केही योग आसनहरूलाई विशेष चिकित्सा अवस्थाका साथसाथै पीठ दुख्ने, मधुमेह, उच्च रक्तचाप इत्यादिको लागि सल्लाह दिइदैन। त्यसैले, योग पोसेस चयन गर्ने र अभ्यास गर्ने क्रममा व्यक्तिले अत्यधिक सावधानी अपनाउनु पर्छ।
केटाकेटि पन र डर
सही योग मुद्रामा पुग्न यसलाई प्रशस्त अभ्यासको आवश्यक पर्दछ। यदि तपाई कक्षामा भर्ना भैसकेका हुनुहुन्छ र यदि तपाई आसासनहरु सहजै गर्दै गएको देख्नुहुन्छ भने यसले तपाईको आत्मविश्वासलाई कमजोर बनाउन सक्छ। तपाईं डराएको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ, यो सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं एक शुरुआत कक्षामा भाग लिइरहनु भएको छ जहाँ तपाईं सबै समान स्तरमा हुनुहुन्छ।
योग को संग गर्ने त र कस्ता मनिसले गर्ने?
योग जो कोहि ले नि गर्ने मिल्छ। तर योग र योग थेरापी अलग छ। सामन्य मनिसले योग थेरपी र योग लाई एउटै रुप मा लिएको पैइन्छ। तर यो गलत हो बिरामी लाई गरौंउने योग असाना र अन्य मनिशले गर्ने असानमा धेरै फरक हुन्छ । तर अहिले सबै जना ले एकै ठाउँ भेला भएर खुल्ला चौरमा गरेको पाईन्छ । खुल्ला चौरमा अनुभव बिहिन र कम अनुभव भएका मनिसले गरौउने योग बाट साबधान । एस्ले गर्दा स्वस्थ्य मा धेरै नकारात्मक असर परेको घटाना देखिन्छ । तेसैले एस्को नकारात्मक असर बाट बाच्नलाई रोग अनुसर को योग गर्ने बानी बसलौ। योग चिकित्सक र योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक र रजिस्टार योग थेरापिस्ट को सल्लाह बमोजिम गरौं। योग जाने रोग मुक्त नजाने रोग युक्त।
सबै नकारात्मक प्रभावहरूको बावजूद, योग असाना सबैका लागि सिफारिस गरिएको एक उत्तम व्यायाम हो। यदि आसनहरू सावधानीपूर्वक चयन गरियो र सही तरिकाले प्रदर्शन गरियो भने, यसले तपाईंको दिमाग र शरीरलाई ठूलो फाइदा दिन सक्छ।
योग तथा प्राकृति चिकित्सक
LATEST Post on Social Media
Yoga & Naturopathy Doctors'Association, Nepal